सम्पन्न भयो ३६ घण्टा व्रत बसी जितिया व्रत - नेपालबहस
सम्पन्न भयो ३६ घण्टा व्रत बसी जितिया व्रत
| ८:०६:१६ मा प्रकाशित
२६ भदौ, जनकपुरधाम । मैथिल समुदायका आमाहरूको महान लोक पर्व जितिया पर्व आज सम्पन्न भएको छ । सो पर्व अन्तर्गत मैथिल आमाहरूले थुक पनि ननिलेर ३६ घण्टासम्म व्रत गरी पर्व सम्पन्न गरेका छन् । सप्तमी, अष्टमी र नवमी तिथिमा मनाइने यो पर्वमा सन्तानको आरोग्य कामनासहित कठोर व्रत गरिने चलन छ । विगतमा छोरा हुनेले मात्र व्रत वस्ने परम्परा रहेकामा आमाहरूले हाल सो परम्परा तोड्दै छोराछोरी दुवैको सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि व्रत बस्ने गरेका छन् ।
‘जितिया पाबनि बड भारी’ ९जितिया पर्व धेरै ठूलो छ० भन्ने कथन अनुरूप व्रती आमाहरूले निराहार उपवास बसी व्रतलाई खण्डित हुन नदिने सङ्कल्प गरेका हुन्छन् । व्रती सोनादेवी भन्छन, “जिमुतवाहनको कामनामा धेरै शक्ति छ, यसको नियमपूर्वक पूजा गर्नाले सन्तानको आयु वृद्धि हुनेगरेको विश्वाससहित ३६ घण्टाको व्रत निर्विघ्नतापूर्वक सम्पन्न गरेकी छु ।”
जनकपुरमा रेल हेर्दै, कोरोना फैलाउँदै ! ६ दिन पहिले
चुनौतीलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न मुख्यमन्त्री राउतको निर्देशन २ हप्ता पहिले
धनुषाका संक्रमित पुरुषको जनकपुरमा मृत्यु १ महिना पहिले
ओलीको खोक्रो राष्ट्रवाद ! पाठ्यपूस्तकको वितरण रोकेकामा कांग्रेस बीपीको आपत्ति ४५ मिनेट पहिले
बोक्सीको आरोपमा हुने अमानवीय क्रियाकलाप रोक्न गृहको निर्देशन ५८ मिनेट पहिले